HALKAAN KA AQRISO W/WARGEYSKA MOGADISHU TIMES 22-JULY 2021
Thursday July 22, 2021 - 08:02:12 in Wararka by Mogadishu Times
Ra’iisul Wasaare Rooble oo guddoomay Nuqulka Warbixinta Guddiga Dib u Heshiisi inta Gobolka Gedo
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa Dorraad ka guddoomay Gu ddiga Dib u heshiisiinta Gobolka Gedo nuqulka warbixintii ay ka soo diyaariyeen Gobolkaas, oo ay ku qoran yihiin talo so—jeedino la xiriira xal ka gobolka.
Guddiga xal u raadinta doorashada Gobolka Gedo, kadib u kuurgal is xaaladda Gobolka, g aar ahaan Magaalada Garbahaarey iyo wadat ashiyo balaaran oo ay la sameeyeen qaybaha bulshada, masuuliyiin iyo siyaasiyiinba, wax ayna ku talo bixinayaan qodobada soo socda in si dhaqso ah loo fuliyo:
1- In R/Wasaaraha XFS uu soo saaro ware egto uu ku amrayo dhammaan ciddii ay qusey so,gaar ahaan Laanta socdaalka, Hay’ada duul ista hawada iyo hay’adda nabad sugidda ee ka ho wlgala garoomada diyaaradaha ee dalka, ga ar ahaan kuwa ka howlgala garoonka Aden Ca dde iyo kan Kismaayo in aan Muwaadin aan maxkamadi dambi ku soo oogin aan sababar agti siyaasadeed darteed loo xanimi karin soc daalk iisa guud ahaan Dalka, gaar ahaanna in la fasaxo diyaaradaha iyo muwaadiniinta u kala safraya Mogadishu – Garbahaarey, Kismaayo – Ga rbahaarey iyo Garbahaarey – Kismaayo.
2- In isla wareegtadaas uu Ra’iisul Wasaar uhu ku soo saaro, in si waafaqsan heshiiskii 27 May 2021, aysan ciidamada kala duwan wax faragelin ah ku sameyn karin siyaasadda iyo amniga doorashada Dalka, marka laga reebo hay’adaha amniga ee loo xilsaaray fulinta qor shaha amniga doorashada. Amniga doorasha da Garbahaareey waxaa loo marayaa si waaf aqsan soo jeedintii Baydhabo iyo heshiiskii 27 May 2021 ee Golaha Wadatashiga Qaranka.
3- In Guddiga doorashada Jubaland (SIEIT) uu soo gudbiyo jadwalka goorta ay tagayaan Garbaaharey iyo wakhtiga la bilaabayo doora shada kuraasta 16ka ah. Waxaan kaloo soo je edinaynaa in la tixgeliyo codsigii Bulshada Gar bahaarey ee ahaa in lagu bilaabo doorashada magaalada Garbahaarey.
4- In ciidamada Dawladda iyo kuwa AMIS OM ee ku sugan aagga Garbahaarey ay xoojiy aan amniga guud ee Degmada si looga illaaliyo in Argagixisadu soo farageliso habsami u so codka amniga doorashada Garbahaarey.
5- In R/Wasaaraha XFS iyo G/Wadatashiga Qaranka ay si joogta ah uga wadatashadaan xaaladda amni iyo siyaasadeed ee qabsoomid da doorashada Gobolka si loo hubiyo habsami u socodka doorashada iyo hirgelinta dhamm aan heshiisyada fududeynaya xasiloonida iyo nabadda doorashada kuraasta Garbahaarey.
6- Ugu dambeyntii waxaan soo jeedinaynaa in M/Garbahaarey laga hirgaliyo mashaariic hor umarineed oo deg deg ah si ay qayb uga qaad ato soo kabashada kalsoonida bulshada ee dhanka dowladnimada. Mashaariicda horutabin ta leh waxaa ka mid ah
Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaa day Maxamed C/hi Farmaajo iyo Amiirka Dalka Qatar Sheekh Tamiim bin Xamad Al Thani ay aa yeeshay wadahadal dhanka Talefonka ah, sida lagu baahiyey W/ Wararka ee SONNA.
Farmaajo ayaa amiirka dalka Qatar ayaa ugu hambalyeeyay munaasabadda Ciidda barakey san ee Ciidul Adxa.
Maxamed C/hi Farmaajo iyo Amiirka Dalka Qatar Sheekh Tamiim bin Xamad Al Thani ay aa sidoo kale is-weydaarsiga hambalyada ka dib u rajeeyay 2da dal iyo dhammaan Muslimiin ta horumar iyo barwaaqo inay ku gaaraan san adkan kiisa kale.
Wada-hadalka dhex maray madaxweynaha wa qtigiisa dhamaaday iyo Amiirka Qatar ayaa ima anayo xilli ay jiraan warar sheegayo in Qatar ay jooj isay lacagihii la filayey inay ku bixiso olola ha doorashada Farmaajo.
D/Soomaaliya & Qatar ayaa waxaa ka dhaxee yo xiriir wanaagsan, waxaana la aamisan yah ay in Qatar ay maal gelisay Farmaajo waqt igii uu ku jira ololaha ka hor inta aan loo dooran ma daxweynaha Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roob le ayaa ka hadlay arimmo kala duwan oo ay ka mid yihiin khilaafka gobolka Gedo, doorashoo yinka dalka,xayiraadaha lagu soo rogo siyaasi yiinta &diyaaradaha iyo hankiisa siyaasadeed.
Md.Maxamed Xuseen Rooble oo ka hadlay munaasabad uu ka ga guddoomay Guddiga Dib u he shiisiinta G/Gedo sida ay ku soo xaliyeen khilaafka ka jirey gobol kaas.
"Waxaan u umahad celinayaa guddiga dib u heshiisiinta G/Gedo ee ka koobanaa wasiirada arrimaha gudaha maamul goboleedyada dalka, waxayna ku guuleysteen xaaladihii ka jirey go bolka Gedo.”ayuu yiri Ra’iisul wasaare Roob le.
Waxa uu sheegay R/ wasaaraha in arrinta G/ Gedo ay ka harsan tahay oo kaliya in wareegto ay ka soo wada saaraan R/wasaaraha iyo mad axwe ynaha Jubbaland madaxda degmada Gar bahaarey.
"Waxaan xaqiiinayaa in qodobkana Gedo oo caqabad ku ahaa heshiiskii September 2020 in la soo gabagabeeyay oo ay harsan tahay kaliya in war eegto lagu soo saaro maamulka degma da garbahaarey.”ayuu yiri R/Wasaaraha.
Isagoo ka hadlayay arrimaha safarada siyaa siyiinta dalka oo dhowaan siyaasiyiin laga soo celiyay qaar kamid ah degmooyinka dalka ayuu she egay R/wasaaraha inaan muwaadinka Soo maaliyeed laga celin karin Magaaladuu doona yo inuu tago isla markaana iska soo sharraxo.
"Socdaalka waa muhiim muwaadinka xaq ay uu u leeyahay inuu safro, Muwaadinka Soomaa liyeed ee Musharraxa ah waa in la dhowro Xuq uuqd iisa Muwaadinimo xaq ayuu u leeyahay fikirkiisa.”ayuu sii raaciyay.
"War baa isoo gaaray in dad meelo ka la duw an laga celiyay qofka muwaadin ka ah lagama celin karo Air Porka, haddii isoo gaartana tallaa bo ayaa laga qada yaa, diyaarad lagama celin karo Garbahaarey, Diyaarad lagama celin karo Kismaayo”
R/Wasaaraha ayaa amray hay’ada socdaalka, Booliska iyo Nabadsugida inaysan ka celin mu waadinka Soomaaliyeed dalkiisa meeshuu uu doono ka tago dalkiisa iyo in diyaaraduhu mee sha ay doonaan tagaan,isagoo ku goodiyay in uu tallaabo ka qaadi doono ciddii ku kacdo falkaas.
R/Wasaare Rooble ayaa khudbadiisa ugaga hadlay khilaafka ka jira siyaasiyiinta ka soo je eda Gobollada Waqoyi waxana uu rajo wanaa gsan ka muujiyay in xal laga gaari doono dho waan.
"Arrimaha Somaliland wadatashiyo ayaan wa daa Madasha Anigaa ayay Masuuliyada i saar atey wadahadallo ayaa socda Anigoo la Tasha naya Gudoomiyaha Aqalka Sare iyo Raisulwas aare ku xigeenka meel wanaagsana waa ay ma rayaan wadahadallada.”ayuu yiri R//w/raha.
R/Wasaaraha ayaa kaga dhawaaqay kulan kan Shalay lagu qabtay M/Muqdisho inuusan dooneyn inuu isu soo taago XIlka Madaxweyna ha ama ba uu noqdo senator ama xildhibaan.
Ugu dambeyntii R/wasaaraha ayaa ugu baaq ay siyaasiyiinta inay ka tagaan Magaalada Caa simada Dalka oo ay Doorashooyinka ay ka dha cayaan Gobolada isagoo ku celiyay inay doora shada dalka ka bilaabatay.
Madaxweynaha Hirshabelle oo gaaray Mag aalada Cadale
Madaxweynaha D/G/Hirshabeelle Cali Guudl aawe Xuseen iyo wafdi ballaaran oo uu hogg aaminayo ayaa Shalay gaaray degmada qadi imiga ah ee Cadale.
Madaxweynaha Hirshabeelle oo wafdiga uu hogaaminayo ay isugu jiraan Wasiirro iyo Xil dhibaano heer federaal, xubno 2da gole ee D/ G/Hirshabeelle
Maamulka G/Sh/Dhexe Saraakiil iyo Marti sharaf ta kale waxaa si wayn u soo dhoweeyay bulshada iyo Maamulka Degm ada Cad ale.
Madaxweynaha ayaa inta uu joogo Degma da Cadale waxauu kalamo kala duwan la qaad an doona qeybaha kala duwan ee bulshada Deg.Cadale.
Md.Cali Guudlaawe ayaa maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa M/Muqdisho ka dib markii uu ka soo laabtay safar uu ku tegey dalka Turk iga. Wararka qaar ayaa sheegaya in lagu wa do maalinta Berri ah ay Magaalada Cadale gaa raan xubno ka mid ah Musharaxiinta dowlada si da Madaxweynayaashii hore Shariif Sheekh Axmed iyo Xusan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha Puntland Saciid C/hi Deni ay aa ku jira olole doorasho oo aan shaacsane yn, oo uu ku doonayo xilka madaxweynaha Soom aaliya. Deni ayaa inkasta oo uusan weli si ras mi ah u shaacin damaciisa, haddana wuxuu qa adayaa tallaabooyin si cad u mu ujinaya inuu do onayo inuu la war eego kursiga uu hadda ku fa dhiyo madax weyne Maxamed C/hi Far maajo.
Sababta Deni uusan weli ugu dhowaaqin Mu sharrax nimadiisa madaxweyne, ayaa ah inay su’aal gel in karto dhex-dhexaadnimadiisa doo rasha da xil dhibaanada Aqalka Sare iyo kuwa G/ Sha cabka ee uu maamulkiisa qabanayo.
Si kastaba, Deni wuxuu wadaa dadaallo uu ta ageero ugu raadinayo ololihiisa doorasho, kuna xaqiijinayo soo saarista xildhibaan daacad u ah oo codka siiya. Qorshaha Deni ayaa ah in inta badan xildhibaanada ka soo baxaya Jubaland iyo Puntland ay noqdaan kuwa isaga taageersa n,maadaama doora shooyinkaas ay maamulay aan isaga iyo saaxiibkiis Axmed Madoobe.
Ilo wareeeyo kala duwan ayaa Caasimada Online u sheegay in Saciid C/hi Deni uu dhigi isa Jubaland Axmed Madoobe kala hadlay inuu ka shaqe eyo sidii ay doorashada Jubaland ugu soo bixi lahaayeen Xildhibaano lagu kalsoony ahay oo uu ka heli karo codad.
Sidoo kale, degaanada Puntland ayaa la she egay inuu Saciid Deni ku dadaalayo sidii uu u ga soo bixin lahaa xildhibaano daacad u ah, oo uu gac antiisa kusoo saaro.
Taageerada Jubaland iyo maamulkiisa ayaa De ni gelineysaa rajo weyn, wuxuuna rumeys an ya hay inuu si fudud uga soo gudbi karo war eegga 1aad ee doorashada oo ah kan ugu adag.
Marka la isku geeyo, xildhibaanada Aqalka Sare iyo G/Shacabka, waxaa Puntland iyo Juba land lagu dooranayaa in ka badan 100 xildhiba an,wax aana qorshaha Deni uu yahay inuu into da badan gacanta ku dhigo.
Tani waxay Deni siin karta waddo fudud oo uu uga soo gudbo wareegga 1aad ee doorasha da madaxweynaha oo ah kan ugu adag. Caa di yan waxaa wareegga 1aad looga gudbaa co dadka 30 illaa 40 xildhibaan.
Haddii Deni uu ka soo gudbo wareegga 1a ad, waxay ka dib guushiisa ku xiran tahay cidda ay is-wajahayaan, waxaana doorashooyinkii ho re laga bartay in mar kasta musharax cusub uu ka guuleysto kuwa xilalka soo qabtay ama mar ka as ku fadhiya.
Sidoo kale, waxay tani su’aal gelineysa in De ni uu maamuli karo doorashada xildhibaanada, maadaama uu yahay musharax. Arrintan ayaa waxaa horey uga hadlay wasiirka qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan.
Md.Jamaal ayaa sheegay in madaxeyne Deni uu dib u dhigay shaacinta inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynimo ee Soomaaliya, isla markaana uu qorsheenayo inuu faragelin ku sameeyo doorashada xildhibaanada ee ka dhaceysa Puntland, sida uu hadalka u dhigay. Jamaal ayaa sidoo kale dalbaday in maada ma uu yahay musharax madaxweyne, Siiciid Deni uu faraha kala baxo dhammaan arrimaha la xi riira doorashada, oo uu si degdeg ah u joo jiyo faragelinta arrimaha guddiyada farsamada door ashada, sida uu hadalka u dhigay.
Si kastaba, Tartanka doorashada Soomaaliya ayaa sanadkaan u muuqdo in leeyahay xiiso ga ar ah, waxaana isku haya musharaxiin miis aan culus leh, manna cidda weli cidda ku horeysa ee ku guuleysan doonta.
Diyaarad Milatari oo ku dhacday garoonka diyaaradaha Xudur
Wararka ka imanaya degmada Xuddur ee G/Bakool ayaa sheegaya in diyaarad ay leeyhi in Milatariga Itoobiya ay ku soo dhacday garo on ka diy aa radaha Dagma da Xuddur ee xarunta G/ Bakool. Diyaaradda ayaa la shee ay in nuuceedu uu ah aa kuwa sida qumaatiga ah u kaca ee loo yaqa an Helicopter waxayna sahay u siday ciidama da Milata riga Ethiopia ee nabad ilaalinta u joo ga Soomaaliya.
Sarkaal u hadlay ciidamada Itoobiya ayaa sheegay inaysan wax khasaare ah oo ka dha shay shilka diyaarada,marka laga reebo in diya aradda bur bur kooban soo gaaray. Illaa iyo ha dda lama oga sababta keentay burburka diyaa rada mana jirta cid ka tirsan Maamulka K/Galb eed oo ka hadashay shilka diyaarada.
Ciidamada nabad ilaalinta ee ka howlgala dalka Soomaaliya oo ku sugan gobolada dalka ayaa waxaa sahayda iyo wax walba oo ay u ba ahan yihiin badanaa lagu geeyaa diyaarado.
Dowladda oo sheegtay in Cadaaladda la horkeeni doono Dadkii Dhibaateeyay Ubax Ibraahim
Wasiirka Cadaaladda X/F/Soomaaliya Cabdi qaadir Maxamed Nuur ayaa sheegay in Cadaa ladda la horkeeni doono dadkii ka dembeeyey dhibaate ynta Ubax Ibra ahim Cabdullaahi.
Ubax Ibraahim Cabd ullaahi oo 15 sano jir ah waxay la dhultaallaa dhib aatooyin isugu jira jir dil, gubis iyo in 2-da Gacmood looga xiray Sil-sillad sida ay Warbaahinta Qaranka u shee ge en dhaqaatiirta gacanta ku haysa kiiskeeda ee Isbitaalka Madiina ka how lgala.
Qoyska Ubax ayaa Warbaahinta u sheegay in dhaawacyada ku yaala jirkeeda ay yihiin ku wa dhammaan uu wada dhaawacan yahay oo ay kula ka cday haweeney uu u geeyey Aabba heed, taas oo si Arxan darro ah nolosha ugu ci qaabtay dhibane Ubax.
Wasiirka Cadaaladda Soomaaliya Md. C/dir Maxamed Nuur Jaamac iyo Taliyaha Qaybta Guud ee Booliska G/Banaadir ayaa isbitaalka Madiina ee M/Muqdisho waxay ku booqdeen Ubax Ibraahim C/hi, waxaana la joogtay Hooy adeed oo dhaawaceeda loogu geeyey G/Gedo oo markii horaba gabadhaan ay ku soo kortay.
Raxmo Maxamed Muxumad oo ah Hooyada dhashay Ubax waxay u sheegtay mas’uuliyiinta in dhaawacyada ku yaala gabadheeda ay u sa been hurdo la’aan habeen iyo maalin ah. Wasiir ka Cadaaladda XFS ayaa u sheegay Ubax oo dhibane u ah dhaawacyo ay u geysteen dad ehelkeeda ah in ay heli doonto cadaalad, isla markaana sharciga la marsiin doono dadkii ka dembeeyey falkaan ka baxsan beni’aadann imada
Ugu dembayntii howlgal ay ka sameeyeen ciidamada ammaanka ayaa lagu soo qabtay qa ar ka mid ah eedeysanayaal lagu tuhunsan yah ay inay wax ka ogaayeen falkaan xanuunka ba dan ee la gula kacay Ubax Ibraahim C/hi.
Sare u kac ku yimid Dadka uu soo Ridanayo cudurka Covid 19 ee Dalka Soomaaliya
W/Caafimaadka DFS ayaa qoraal ay bogee da ku shaacisay kiisaskii ugu dambeeyay ee cu durka Covid 19 ee dalka Soom aaliya. D/G/Puntland ayaa ah gob olka ugu badan ee laga soo she egayo cudurkan baaritaanadii ugu dambeeyay.
23 Ruux ayaa laga helay Cudurka Covid19 Maamul Goboleedka Puntland halka Jubbaland laga helay 12 Ruux,Somaliland 3 Ruux iyadoo G/ Ba naadirna dadka laga baaray 24kii saac ee ugu dambeeyay laga helay 1 ruux cudurkan.
Cudurka Covid 19 ayaa sidoo kale waxa uu sare u kac ka sameeyay wadammo badan oo caalamka ka tirsan iyadoo dalka Hindiya la xaqi ijiyay in ay u dhinteen cudurkan dad gaaraya afar Malyan oo ruux.
Mareykanka ayaa markii ugu horreysay mud do lix bilood ah weerar duqeyn ah ka geystay Soomaaliya, taas oo uu la beegsaday xubno ka tirsan Al-shabaab, waxaana duqeyntay ay ah eyd mid uu ku caawiyay ciidamada kumaandoo sta Soomaaliya.
Waaxda Gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon-ka ayaa galinkii dambe ee Talaadadii xaqiijisay inay ka dambeeyeen hal weerar oo ka dhacay meel u dhow magaalada Gaalkacyo, oo qiyaastii 580 Kilo Mitir dhanka waqooyi ka xigta magaalada Caasimadda ee Muqdisho.
Sarkaal ka tirsan W/Gaashandhigga Mareyk anka ayaa Idaacadda VOA u sheegay in duq eyntaas fulinteeda loo cuskaday shirciyo hore u jiray, si loo difaaco xoogagga Mareykanka xulif ada la ah, waxaana la fuliyay duqeyntaas iyada oo aysan jirin ciidan Mareykan ah oo ku sugan dhulka.
"Ciidamada Mareykanku waxay hayeen how lgal talo bixin iyo caawimaad ah, kuwaas oo la gu taageerayay ciidanka Soomaaliya” ayuu yiri afhayeenka waaxda G/dhigga Mareykankanka Cindi King oo intaas raaciyay "Ma jirin ciidamo Mareykan ah oo la socday ciidamada Soomaal iya intii uu socday howlgalkan”.
Weerarkii cirka ee Talaadadii lala beegsaday Al-Shabaab ayaa ah duqeyntii ugu horreysay ee noocan oo kale ah muddo lix bilood ah, waa na tii ugu horreysay oo la qaado tan iyo markii uu xafiiska la wareegay madaxweynaha Mare ykanka Joe Biden.
Saraakiisha Mareykanka ayaa ka gab saday inay faahfaahin ka bixiyaan sababta duqeyntan loo oggolaaday ama in Taliska Mareykanka ee Afrika uu bilaabi doono inuu sameeyo olole aad u xooggan oo dhanka cirka ah oo lagu taa geer ayo ciidamada Soomaaliya, sida kuwa Mar ey kan ka uu Soomaaliya ka geystay sanadihii la
PUNTLAND oo hanjabaad u dirtay ganacsa tada Mudug
Guddoomiyaha G/Mudug ee Puntland, Md.Cabdiladiif Muuse Nuur (Sanyare) oo warey si siiyey laanta afka Soo maaliga ah ee VOA ayaa ka hadlay daga alka adag ee ay kula jiiraan daga alyahan ada Al-Shabaab iyo Daa ci sh. Sanyare ayaa shaaca ka qaaday inay xi didda u siibeen shabakadihii Al-Sha baab ee ku sugnaa Mudug, isla-markaana ay weli wadaan howl-gallo amniga lagu xaqiijinayo
Sidoo kale wuxuu hanjabaad u diray ganacs atada Mudug, gaar ahaan kuwa lacagaha ba adda ah siiya kooxaha argagixisada, isaga oo sheegay in ay tallaabo ka qaadi doonaan.
Guddoomiyaha ayaa sidoo kale intaasi kusii daray in nabaddu ay muhiim u tahay ganacsig a, loona baahan yahay in laga wada-shaqeeyo amniga guud ee deegaanka.
"Walaal horta ganacsatadu dalka ayey wax ku leeyihiin waxa ay ku ganacsanayaana waa nabadda, haddii nabad la waayana ganacsan maayaan, nabadda waxa suganayana waa ciid anka dhiig-baa ku baxaya, dhaqaalahaa ku ba xaya, dadaal-baa ku baxaya, inay ganacsatadu qeybtooda qaataan waa waajib Diini ah oo saaran,” ayuu yiri gudoomiyuhu.
Dhinaca kale wuxuu ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Puntland inay qeyb ka qaataan dagaalkaka socda G/Mudug ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
"Halgankan lagula jiro kooxaha argagixisada waa inay qeybtooda ka qaataan, haddaa marka u cudur daareynay laakin argagixisadii halkan jogtay xididada ayaan u siibnay, lacagihii laga qaadi jiray iyo beentii loo sheegi jirayna aanu ku difaacnay hadda waxaa la rabaa inay is-ga rtaan oo ay fahma an meesha loo socdo,” ayuu markale yiri Sanayare.
Sidoo kale wuxuu intaasi sii raaciyey "Mee sha loo socdo waa in ganacsiga uu kordho, am nigu bato, Argagixisadu yaraato,”.
Puntland ayaa maalmihii u dambeeyey xoo ji say howl-gallada ka dhanka ah kooxda Al-Sha baab, waxaana bishii hore 18 ka tirsanaa ay ku toogatay magaalada Gaalkacyo.
Faahfaahin ka soo baxaysa diyaarad ku dha cday garoonka diyaaradaha magaalada CeelWaaq
Waxaa soo baxaya faahfaahino ku saabsan diyaarad ku dhacday garoonka diyaaradaha De gmada Ceelwaaq ee G/Ge do. Diyaaradan oo ka soo duushay M/Nayrobi ayaa waxaa la socday 45 ru ux iya doo dhammaan raka abka saarnaa diyaaradaas ay ka badbaadeen.
Wararka waxa ay sheegayaan in diyaaradan ay ka baxday waddada markii ay soo caga dhi gatay waxaana loo aaneynayaa shilkan inuu ku yimid gar oonka diyaaradaha oo aan la dayact irin muddooyinkii la soo dhaafay. Hase yeeshe mas’uuliyiin katirsan Ismaamul ka Mandheera ayaa sheegay in 7-ruux oo ah Rakaabka Diyaa radda dhaawac uu soo gaaray sida ay ku ogaa deen natiijada hordhaca ah oo ay ka heleen shirkaas.
General Biixi oo xaqiijiyay in General Saad aq uu ka mid yahay ciidamada ka dagaala maya Galmudug
Taliyaha ciidamada dhulka ee Soomaaliya Jen. Maxamad Tahliil Biixi ayaa saxaafada u xa qiijiyay in Saadaq John uu ka mid yahay ciidan ka hadda ka dagaalamaya aagga Bacaadweyn ee D/G/Galmudug.
Wareysi uu siiyay Taliya ha ciidamada lugta laanta af ka soomaaliga ah ee BBC-da ayuu ku sheegay in Gene ral Saadaq John uu ka mid yahay saraakiisha hoggaaminaysa ciidamada ka dagalaamaya Galmudug.
"Saadaq John saraakiisha aan hoggaamin ayo ayuu ka mid yahay, 3 Madax oo aan u qey binay ayuu qeyb jooga, saraakiishaas ayuuna kamid yahay. Ciidanka Federaalka kama tirs ano, balse waa shakhsi dagaalka ku jira.” ayuu yiri taliye Biixi.
General Saadaq John ayaa 12-kii bishii Apr il ee sanadkan laga qaaday xilka taliyaha boolis ka ee gobolka Banaadir, kadib markii uu sheeg ay inuu joojiyay kulan uu Golaha Shacabka ee Barlamaanka uga doodi lahaa arrimaha doora shada. Waxaa laga xayuubiyay darajadiisa cii dan.
Waxa uu go’aankiisa ku sababeeyay in Go laha Shacabka uu halis gelinayo ammaanka da lka. Isla maalintaas, Golaha Shacabka ayaa u codeeyay in muddo laba sano ah xilka loogu daray hay’adaha dowladda.
Go’aanka G/Shacabka ayaa dhaliyay in iska horimaadyo hubaysan ay Muqdisho ku dhex maraan ciidamo ka wada tirsan kuwa DF oo ka la taabac san siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo madaxda dowladda. Saadaq John ayaa kamid ahaa saraakiisha hormuudka u ahaa dhinaca ciidanka taabacsan mucaaradka, waxaana uu saldhig ka sameystay xaafadda Shiirkole ee caasimadda. Dhawaan ayuu gaaray M/Dhuu sa mareeb waxaana qorshuhu ahaa inuu ka qeybg alo dagaalka ka dhanka ah xooggaga Al-Shab aab ee ku sugan Galmudug.
Wasiirka amniga ee Galmudug, Axmed Ma callin Fiqi, ayaa bartiisa Facebook ku sheegay taliska ciidanka dowladd